Yaa Axmed Baasto ugu yeeray safarka Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Yaa Axmed Baasto ugu yeeray safarka Muqdisho
Yaa Axmed Baasto ugu yeeray safarka Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Galmudug ee lagu doortay magaalada Cadaado Axmed Maxamuud Baasto oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedada ay u yimaadeen magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlayay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sheegay in ujeedadooda safarka Muqdisho ay tahay danaha deegaanada Galmudug, sida uu sheegay.
Wuxuu sheegay inay la kulmayaan madaxda ugu sareyso dalka iyo dadka kasoo jeeda deegaanada Galmudug, waxaana ay ka wada hadli doonaan arrimaha Galmudug.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in xafiiska ra’iisul wasaaraha looga yeeray Axmed Baasto oo dhawaan lagu doortay magaalada Cadaado, waxaana uyeeritaankiisa uu qeyb ka yahay dhameynta xiisadda Galmudug.
“Waxaan Safar shaqo ku nimid magaalada Madaxda dalka, waxaan kulan la sameyneynaa masuuliyiinta dalka dhamaan iyo dadka kasoo jeeda Galmudug, waxaana kala hadli doonaa baahiyahooda anagoo iyaga matalayna”ayuu yiri Axmed Baasto
Axmed Baasto ayaa lagu doortay magaalada Cadaado, kadib khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Xaaf iyo ku xigeenkiisa oo taageero ka helayay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug.